जारी लक डाउनमा गाउँकेन्द्रीत डा. भुषालको स्वास्थ्य सेवा | PBM News.com
जारी लक डाउनमा गाउँकेन्द्रीत डा. भुषालको स्वास्थ्य सेवा
चितवन १८ जेठ । जारी लड डाउनको बेला नागढुंगामा केहियुवाहरुले स्वास्थ्यकर्मीको गाडी रोकेर खानतलासी गरिरहेका बेला डा.सन्तोष शर्मा भुषाल पदमपुर स्थित प्रकाश क्लिनीकमा विरामी जाँच्दै थिए । उता स्वास्थ्यकर्मीमाथी दुव्र्यवहार हुँदै थियो । यता डा. भुषाल दर्जनौं विरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका थिए । जारी लक डाउनकाबीच पनि विरामीहरुको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि उनि गाउँ गउँमा थिए ।
जनरल फिजिसियन डा. भुषाल अहिलेपनि निरन्तर गाउँघरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन् । महामारीकाबीच पनि भरतपुर देखि पूर्वी चितवनको गाउँ गाउँमा पुगेर स्वास्थ्य परीक्षणगर्नु चानचुने कुरा होइन । गाउँगाउँमै पुगेर सेवा दिएकै कारणले होला पूर्वी चितवनमा उनी लोकप्रिय बन्दै गएका छन् । जारी लक डाउनकाबीच पूर्वी चितवनको टाँडी, पर्सा, भण्डारा, सौराहा, जुटपानी हुँदै पदमपुर सम्म पुगेर सेवा दिइरहेका छन् ।
झोलामा मास्क, सेनिटाईजर, पिपिइ एन – ९५ मास्क लगायतका आवश्यक सामग्रीहरु बोकेर गाउँ गाउँ पुग्ने गरेका हुन । जारी लकडाउनका कारण विरामी सहजै अस्पताल सम्म पुग्न सकेका छैनन । अस्पताल पुगेकाहरुले पनि सजिलै उपचार पाउन नसकेका बेला सर्वसाधरणहरुले गाउँघरमै स्वास्थ्य परीक्षण देखि आवश्यक परामर्श लिन पाएका छन् । उनलाई भेट्न गाउँका टोलटोलबाट विभिन्न उमेरका विरामीहरु आउने गरेका छन् । जेष्ठनागरिक देखि बालबालिका सम्मलाई राहत पुगेको छ । कुनै जटिल समस्या देखियो भने समस्यासँग सम्बन्धित चिकित्सकलाई नै सम्पर्क गराई अस्पताल सम्म पुग्ने वातावरण समेत तयार पार्दै आएका छन् । भरतपुरमा जन्मिएका डा. भुषाल गाउँगाउँमा सेवा दिन पाउँदा खुशी लाग्ने गरेको बताउँछन् । यस अघि चितवन मेडिकल कलेज, मोडल अस्पताल भरतपुरमा रहेर विरामीलाई सेवा दिँदै आएका डा. भुषाल अहिले पूर्ण गाउँघर केन्द्रीत सेवामा व्यस्त छन् ।
डा. भुषाल जस्तै धेरै चिकित्सकहरु जारी लक डाउनकाबीच पनि स्वास्थ्य सेवामा सक्रिय भएर जुटेका छन् । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी सबैले आफु र आफ्नो परिवारलाई जोखिममा राखेर दैनिक विरामीहरुको स्वास्थ्यसेवामा खटिएका छन् । चितवनका सबैजसो चिकित्सकहरु यतिबेला कार्यक्षेत्रमै छन् । उनीहरुको मनोबल बढाउनुको साटो मनोबल गिराउने काम गर्नुहुँदैन ।
अहिलेपनि नेपाल मेडिकल कलेज ( एनएमसी )का स्वास्थ्यकर्मीहरु प्रदर्शन गरिरहेका छन् । इमर्जेन्सी, फिवर क्लिनिक र आइसोलेसन बाहेक सबै सेवा बन्द गरेर कलेजका मेडिकल डाक्टर, इन्टरनल डाक्टरहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बिरामी जाँँच्ने क्रममा चिकित्सकमाथी हातपात भएको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो । यसरी विरामीहरुको स्वास्थ्यसेवामा खटिएका चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल गिराउने कामलाई निरुत्साहित गर्दै मनोबल बढाउने काममा सबैलाग्न आवश्यक छ ।
दुर्घटना अपडेटः चालकसहित ६ को सनाखत
खरकाे छानाेे हटाउने अभियानमा पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे
सांसद सरिता गिरीको विषयले समाजवादी पार्टी भित्र खैलाबैला सुरु, अब के गर्ने भन्ने बारे छलफल गर्न बैठक बस्दै
सचिवालय भाँडिएपछि प्रचण्ड निवासमा गोप्य भेला
श्रमिकलाई अविलम्ब राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग काँग्रेस सभापति देउवाको माग
चितवनमा १८ महिने बालकसहित १२ जनामा कोरोना पुष्टि